मानिस किन असफल हुन्छ ? | Ekhabaronline.com
बिल गेट्स | प्रकाशित मितिः आइतवार, भदौ २५, २०७४ 9:30:14 AM | 111 पटक पढिएको |
अपवाद बाहेक मानिसहरू कसरी सफल बन्ने भन्ने सोच्छन् । नाम र दाम दुवै कमाएर समाजमा प्रतिष्ठित जीवन जिउने सपना सबैको हुन्छ । तर, थोरैले मात्र आफ्नो सपना पूरा गर्न सक्छन् । जसले समस्या पहिल्याउन सक्छ, उसैले मात्र सफलता चुमेको इतिहास छ । मानिस किन असफल हुन्छ त ?
बिल गेट्सको अनुभवः
डरः व्यापार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै मनमा पस्ने डर हो यो । मानिसको मनमा कहाँबाट व्यापार सुरु गर्ने होला भन्ने डर हुन्छ र यसैले तपाईंलाई अगाडि बढ्न रोकिदिन्छ । यस्तै द्विविधाका कारण अधिकांश मानिस आफ्नो बिजिनेस आइडियालाई मूर्तरूप नै दिन पाइरहेका हुँदैनन् । कारोबार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै धेरै मानिस डराउने चिज हो यो । अर्थात्, अधिकांश मानिसले जेको कारोबार सुरु गर्न लागेका छन्, आफू त्यसको जानकार होइन भनेर मन सानो बनाउँछन् र अगाडि बढ्नबाट डराउँछन् । आफू जेको व्यापार गर्ने योजनामा हुन्छन्, त्यसको आफू जानकार नभएको भन्दै डराउँछन् ।
लगानी नजुट्ने पिरस् कारोबार सुरु गरेपछि सबैभन्दा ठूलो डर लगानीको हुन्छ । कैयौँपटक मानिस यही डरका कारण अगाडि बढिसकेको आफ्नो पाइलालाई रोक्छन् र उल्टो पछाडि हिँड्न थाल्छन् । जो व्यक्ति यसरी आत्तिन्छन्, उनीहरूले सफलता चुम्न सक्दैनन् । लगानी जुटिहाले पनि कतै डुब्ने पो हो कि भन्ने सोचाइले सम्भावना भएको कामबाट पनि मानिस पछाडि हट्न बाध्य हुन्छ । र, नयाँपन दिने गरी सोचेको व्यापार–व्यवसाय पनि अगाडि बढाउन सक्दैन ।
अनावश्यक आशंकास् सन्की पो भन्ने हुन् कि ? भन्ने आशंकाले मानिसलाई सफलता हात पार्नबाट रोक्न सक्छ । कतिपय मानिसलाई मनमा यस्तो पनि डर हुन्छ कि, आफूले नयाँ खालको व्यवसाय सुरु गर्दा अरुले कुरा काट्ने हुन् कि रु कतै पागल, सन्की पो भन्छन् कि रु अरूले के भन्ला भनेर सोचिरहने व्यक्तिले जीवनमा प्रगति गर्न सक्दैन ।
हीनताबोधः अनुभव, लम्बाइ, लिंग र छालाको रंगसँग जोडिएर कसैले हीनताबोध गर्छ भने उसले जिन्दगीमा प्रगति गर्न सक्दैन । व्यवसायी बन्ने तीव्र इच्छा भएका मानिसलाई लाग्ने अनुभव नभएको डर जति हानिकारक छ, त्योभन्दा बढी आफ्नो उचाइ, लिंग र छालाको रंगको कारण छ । यहीकारण मानिस व्यवसायमा हात हाल्न डराउने गरेको पाइन्छ । जसका कारण राम्रो सेवा र गुणस्तरीय प्रोडक्ट बजारमा लैजानबाट पछि हट्छन् । व्यवसायका लागि सेवा तथा प्रोडक्ट नै गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा उनीहरूले बिर्सन्छन् ।
-बिल गेट्स विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् ।